Fitsidihana ny lapan'ny filoham-pirenena ao Kabul miaraka amin'ny Taliban Fighters ho mpitari-dalana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Fitsidihana ny lapan'ny filoham-pirenena ao Kabul miaraka amin'ny Taliban Fighters ho mpitari-dalana
Vaovao Mafana Afghanistan • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Taliban ao amin'ny lapam-panjakana
Ny mpitarika taliban Mullah Abdul Ghani Baradar dia nambara ho filoham-pirenena vaovao any Afghanistan.
Manome fotoana ho an'ny mpanao gazety Al Jazeera avy amin'ny biraon'ny filoham-pirenena ao Kabul ny Taliban Fighters.
Nandao an'i Afghanistan ny filoham-pirenena Afghanistan, Ashraf Ghani, rehefa nikatona tao Kabul ny Taliban, raha ny filazan'ny mpirakidraharaha ambony amin'ny fandriampahalemana, Abdullah Abdullah.
Al Jazeera TV dia nandefa fandrakofana manokana avy ao anatin'ny lapa mampiseho ireo Taliban FIghters mipetraka ao amin'ny biraon'ny filoha ao Kabul
The Masoivohon'i Etazonia ao Kabul dia mampianatra ny mpino amerikana momba ny tatitra momba ny seranam-piaramanidina Kabul nirehitra. Ny torohevitra ho an'ny Amerikanina tafahitsoka ao Afghhanistan mba hialokaloka eo amin'ny toerany
Emirà Islamika ao Afghanistan no hambaran'ny Taliban
Ny fitondrana Taliban dia mikasa ny hamerina ny anarana hoe Afghanistan amin'ny Emira Islamika ao Afghanistan.
Mandritra izany fotoana izany dia mandefa miaramila 6000 mivantana any Afghanistan i Etazonia, 1000 fanampiny ireo efa 5000 an-dalam-be.
Mpanao gazety mitatitra ny tambajotram-baovao miorina any Qatar Al Jazeera nasaina androany hitsidika ny lapan'ny filoham-pirenena ao Kabul, Afghanistan. Taliban Fighters dia naka sary tao amin'ny biraon'ny filoha nitondra basim-borona.
Toa misy ny horohoro sy tahotra, saingy tsy nisy rà latsaka naratra tao amin'ny CIty renivohitra Kabul androany niaraka tamin'ny mpiady taliban nandray ny tanàna haingana be.
It nanomboka ny marainan'ny alahady 15 aogositra ary nifarana tamin'ny alina. Nanjary eo ambany fifehezan'ny Taliban i Afghanistan taorian'ny 20 taona ary an-tapitrisany no nandany azy ireo.
Ny alahady teo dia nambara fa nandao ny firenena niaraka tamin'ny mpikambana maromaro tao amin'ny kabinetrany i Ghani.
“Nandao an'i Afghanistan ny filohan'i Afghanistan teo aloha. Navelany ho firenena ity fanjakana ity [noho izany] Andriamanitra no hampamoaka azy, ”hoy i Abdullah Abdullah, filohan'ny filankevitra avo momba ny fampihavanam-pirenena, tamin'ny horonantsary nalefa tao amin'ny pejy Facebook-ny.
Ny fianjeran'ny governemanta tohanan'ny Tandrefana ao Kabul dia nateraky ny taliban blitzkrieg nanomboka ny 6 aogositra lasa teo ary nanjary voasambotra ireo faritany Afghan mahery am-polony tamin'ny alahady maraina.
Nandositra an'i Afghanistan ho any Tajikistan ny filoha Afgana Ashraf Ghani. Ity dia hita fa tsy tia tanindrazana ny olom-pirenena Afghana.
Ireo firenena tandrefana sosotra dia mikorontana hamindra ireo mpiasan'ny masoivoho. Ny praiminisitra UK Boris Johnson dia manentana ny firenena tsy hanaiky ny governemanta Taliban ho an'i Afghanistan.
Kivy: olona any amin'ny seranam-piaramanidina manandrana mandositra Taliban no nibodo an'i Afghanistan
Manodidina ny 1500 ny olom-pirenen'i Nepal ao Afghanistan. Nilaza ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Nepal fa miezaka ny hanao fandaharana mba hanampiana ny olom-pireneny handao an'i Afghanistan.
Nafindran'i Frantsa tany amin'ny faritry ny seranam-piaramanidina ao Kabul ny masoivohon'izy ireo, raha ny tatitra avy any Etazonia kosa dia nilaza fa may ny seranam-piaramanidina ary nakatona. Ireo diplomaty eoropeana dia nafindra tany amin'ny toerana tsy fantatra.
Fanapahana: korontana ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kabul any Afghanistan satria an-jatony no manandrana mandositra ny firenena faran'izay haingana. pic.twitter.com/jwui8bjbFs
- Insider Paper (@TheInsiderPaper) Aogositra 15, 2021
Korontana ao Kabul AIrport
Diplomaty mihazakazaka mandositra. Hita tao amin'ny Masoivohon'i Pakistan ao Kabul, Afghanistan
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia namoaka ity tafatafa ity niaraka tamin'ny sekreteram-panjakana amerikana Anthony Blinken niaraka tamin'ny ABC News
Antony J. Blinken, sekreteram-panjakana
FANONTANIANA: Ary ankehitriny ny sekreteram-panjakana Tony Blinken. Sekretera Blinken, misaotra anao nanatevin-daharana anay.
SEKRETARY BLINKEN: Misaotra anao manana ahy.
FANONTANIANA: Andao atomboka amin'ny satan'ny masoivohontsika ao Kabul. Matoky ve ianao amin'ny fiarovana ny mpiasa amerikanina ao amin'ny masoivoho na dia manodidina an'i Kabul aza ny Taliban?
BLINKEN SEKRETERA: Asa voalohany ho ahy izany, John. Miasa izahay mba hahazoana antoka fa azo antoka sy azo antoka ireo mpiasa ao aminay. Mamindra toerana ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny masoivohonay amin'ny toerana iray izahay. Izany no antony nandefasan'ny filoham-pirenena hery marobe mba hahazoana antoka fa, raha manohy manala ny fisian'ny diplomasia misy antsika isika dia manao izany amin'ny fomba azo antoka sy milamina ary miaraka amin'izay dia mitazona ny fisian'ny diplomatika fototra ao Kabul.
FANONTANIANA: Ka avelao fotsiny aho hino fa nahare anao tsara aho. Mamindra ireo mpiasa ao amin'ny masoivoho ianao - midika izany fa manakatona ny tobin'ny masoivoho amerikana ao Kabul ianao, fa hafoina io trano io?
BLINKEN SEKRETERA: Amin'izao fotoana izao, ny drafitra ampiharinay dia ny famindrana ireo mpiasa avy ao amin'ny tobin'ny masoivoho ao Kabul ho amin'ny toerana iray any amin'ny seranam-piaramanidina mba hiantohana fa afaka miasa am-pilaminana sy am-pilaminana izy ireo, mba hanohizan'ny olona hatrany an'i Afghanistan ho nataontsika hatramin'ny aprily - faran'ny aprily 28 aprily. Nahazo baiko tamin'ny fiainganana izahay nanomboka teo. Nataontsika tamin'ny fomba tena iniana izany. Nanitsy izahay arakaraka ny zava-misy eny ifotony. Izany no antony anananay hery an-tànana izay nandefasan'ny Filoha mba hahazoana antoka fa afaka manao izany amin'ny fomba azo antoka sy milamina isika. Fa ilay fitambaran-tena ihany - miala any ny havantsika ary mifindra any amin'ny seranam-piara-manidina.
FANONTANIANA: antontan-taratasy anatiny iray izay nivoaka ho an'ny mpiasan'ny masoivoho ny zoma lasa teo dia nanome torolàlana ny mpiasa amerikana ao amin'ny masoivoho mba hampihena ny habetsaky ny fampahalalana saro-pady momba ilay trano, ary nilaza koa izy io hoe: zavatra izay azo ampiasaina amin'ny fomba ratsy amin'ny ezaka fampielezan-kevitra. ” Mazava ho azy fa ny ahiahy eto dia ny Taliban - ary izany koa, araka ny eritreritro, ny antony hamindranao olona any amin'ny seranam-piara-manidina - ho tototry ny Taliban ary handray io fitambaran'ny masoivoho io.
SEKRETARY BLINKEN: Ity dia fomba fiasa mahazatra amin'ny toe-javatra toy izany. Misy ny drafitra napetraka raha toa ka miala ao amin'ny mason'ny masoivoho isika, mamindra ny firenentsika amin'ny toerana hafa, mba handray ireo dingana rehetra, ireo izay notanisainao ireo. Ka io indrindra no hataontsika amin'ireo toe-javatra ireo, ary averiko indray, atao amin'ny fomba tena iniana, atao amin'ny fomba milamina, ary atao amin'ny tafika amerikana any mba hahazoana antoka fa mahavita azy isika amin'ny fomba azo antoka.
FANONTANIANA: Amim-panajana, tsy dia be loatra ny zavatra hitantsika toa milamina loatra na fomba fanao mahazatra. Vao tamin'ny volana lasa teo dia nilaza ny filoha Biden fa na tamin'ny toe-javatra inona na inona - ary izany dia izy - izany no teniny - tsy nisy toe-javatra nisy ny mpiasa amerikanina, ny mpiasan'ny masoivoho navoaka an'i Kabul tamin'ny famerenana ireo seho hitantsika tany Saigon tamin'ny 1975. Ka tsy izany ve no hitantsika ankehitriny? Midika izany fa na ny sary aza dia mampihetsi-po ny zava-nitranga tany Vietnam.
BLINKEN SEKRETERA: Andao hihemotra kely. Tsy Saigon io. Ny tena zava-misy dia izao: Nandeha tany Afghanistan izahay 20 taona lasa izay nanana eritreritra iray tao an-tsaina, ary izany dia ny fifampiraharahana amin'ireo olona nanafika anay tamin'ny 9/11. Ary nahomby io iraka io. Nentinay teo amin'ny fitsarana i bin Laden folo taona lasa izay; al-Qaida, ilay vondrona nanafika anay, dia nihena fatratra. Ny fahaizany manafika antsika indray avy any Afghanistan dia efa nisy - tsy misy amin'izao fotoana izao, ary hataonay antoka fa mitazona ny toerany hatrany amin'ny faritra izahay, ny hery ilaina mba hahitana ny fisian'ny fandrahonana mpampihorohoro indray. afaka hiatrika izany. Ka raha ny zavatra kasainay hatao any Afghanistan dia vitantsika izany.
Ary ankehitriny, nandritra ny fotoana rehetra, ny filoha dia nanana fanapahan-kevitra sarotra, ary io fanapahan-kevitra io dia inona no hatao amin'ireo hery sisa tavela nolovantsika rehefa tonga tany amin'ny birao tany Afghanistan isika, miaraka amin'ny fe-potoana napetraky ny governemanta teo aloha mba hakana azy ireo nivoaka tamin'ny 1 Mey. Izay ny fanapaha-kevitra noraisiny. 20 taona no nijanonanay tany Afghanistan - $ 1 trillion, 2,300 XNUMX ny ainy amerikana very - ary indray, soa ihany, fa nahavita nanao izay nokasainay hatao voalohany. Nanapa-kevitra ny Filoham-pirenena fa tonga ny fotoana hampitsaharana ity ady ho an'i Etazonia ity, hiala amin'ny afovoan'ny ady an-trano any Afghanistan, ary hahazoana antoka fa mijery ny tombontsoantsika manerana an'izao tontolo izao, manerantany, ary napetraka hampandroso ireo tombontsoa ireo izahay. Izay no ataonay.
FANONTANIANA: Saingy ny filoha kosa dia notoroan'ireo mpanolotsaina miaramila ambony azy, araka ny fahazoako azy, hamela ny fisian'ny miaramila any amin'ny firenena misy tafika amerikana 3-4,000 eo ho eo. Misy ve ny nenina ankehitriny noho ny tsy nandraisany izany torohevitra izany, ny torohevitr'ireo mpanolotsaina miaramila ambony azy, hamela ny fisian'ny miaramila any Afghanistan?
BLINKEN SEKRETERA: Ity ny safidy natrehin'ny Filoha. Tadidio indray fa ny fe-potoana iray dia napetraky ny fitondrana teo aloha tamin'ny 1 Mey mba hamoahana ireo hery sisa tavela hivoaka avy ao Afghanistan. Ary ny hevitra fa azontsika notohanana ny toe-java-misy amin'ny fitazonana ny herintsika dia heveriko fa tsy mety, satria ity no mety hitranga raha nanapa-kevitra ny hitazona ireo hery ireo ny filoha: Nandritra ny vanim-potoana nanomboka ny fifanarahana hatramin'ny 1 Mey, nitsahatra ny nanafika ny herinay ny Taliban, nitsahatra ny nanafika ny tafiky ny OTAN. Izy io koa dia nijanona tamin'ity fanafihana goavambe ity izay hitantsika izao mba hiezahana haka ny firenena, handeha hitady ireo renivohi-paritany ireo, izay tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nahomby tamin'ny fanatanterahana izany.
Tongava amin'ny 2 Mey, raha nanapa-kevitra ny hijanona ny Filoham-pirenena dia ho tapaka ny fonon-tànana rehetra. Mety hiverina hiady amin'ny Taliban izahay. Tokony hanafika ny herintsika izy ireo. Mety hanana hery 2,500 na mahery sisa tavela eto amin'ny firenena isika miaraka amin'ny herin'ny rivotra. Heveriko fa tsy ho ampy izany hiatrehana ny zavatra hitantsika, izay manafintohina ny firenena iray manontolo, ary ho eo amin'ity programa ity aho amin'io fotoana io angamba mety hanazava ny antony nandefasantsika an'aliny hery niverina tany Afghanistan hanohy ady izay heverin'ny firenena fa tokony hofaranana aorian'ny 20 taona, $ 1 tapitrisa, ary ain'olona 2,300 no very, ary fahombiazana tamin'ny fanatrarana ireo tanjona napetrakay fony isika niditra voalohany.
FANONTANIANA: Mamelà ahy hilalao anao zavatra izay nolazain'ny filoha Biden tamin'ny fiandohan'ity taona ity, raha nanontaniana izy momba ny vinavinan'ny inona, raha ny fahitantsika azy izao, fanjanahana Taliban an'i Afghanistan:
"Ny mety hitranga dia ny fananan'ny Taliban mihoatra ny zava-drehetra ary fananana ny firenena iray manontolo dia tsy azo inoana."
Ka sao dia nitaona ny masoivohony manokana izy? Tsy nihaino azy ireo ve izy? Fa maninona no diso hevitra be momba an'io izy?
BLINKEN SEKRETERA: Zavatra roa. Hoy izy ary efa nolazainay nandritra ny fotoana rehetra fa nanana toerana matanjaka ny Taliban. Rehefa tonga tany amin'ny birao izahay, ny Taliban dia teo amin'ny toerany matanjaka indrindra tamin'ny fotoana rehetra hatramin'ny 2001, satria izy no nitana ny fahefana farany tao Afghanistan talohan'ny 9/11, ary afaka nanangana ny fahaizany izy tao anatin'izay roa taona lasa izay fomba manan-danja. Ka izany no zavatra hitanay sy hitanay mialoha.
Rehefa nilaza izany izy, ny hery fiarovana afghana - ny hery fiarovana afghana izay nampiasainay dia nanambola nandritra ny 20 taona ny vondrona iraisam-pirenena - nanangana tafika 300,000, nampitaovana azy ireo, nijoro tamin'ny tafika an'habakabaka nananan'izy ireo fa ny Taliban tsy nanana - io hery io dia nanaporofo fa tsy afaka niaro ny firenena. Ary izany dia nitranga haingana kokoa noho ny noeritreretinay.
FANONTANIANA: Ka inona no dikan'izany rehetra izany amin'ny sarin'i Amerika eran'izao tontolo izao sy momba izay noresahan'ny Filoha Biden mafy dia mafy, ny filàna miady amin'ny anaran'ny demokrasia sy ny soatoavina demokratika, hahita antsika hiala ary vondrona mahery fihetsika miditra sy mandray fahefana izay te-hanidy ny zon'ny zazavavy handeha hianatra, izany dia ny famonoana miaramila mitolo-batana, tsy inona izany fa ny solontenan'ireo soatoavina demokratika izay nolazain'ny filoha Biden fa tokony hijoro ho an'ny Etazonia?
SEKRETERA BLINKEN: Ka heveriko fa misy zavatra roa manandanja eto. Voalohany, niverina tamin'ity fanoloran-kevitra ity aho fa raha ny zavatra kasainay hatao any Afghanistan - ny antony nahatongavanay teo aloha, hiatrehana ireo izay nanafika anay tamin'ny 9/11 - dia nahavita nanao an'izany izahay. Ary io hafatra heveriko fa tokony hanako mafy io.
Marina ihany koa fa tsy misy zavatra tadiavin'ireo mpifaninana stratejika eran'izao tontolo izao mihoatra ny mahita antsika milomano any Afghanistan mandritra ny dimy, folo na roa-polo taona. Tsy tombontsoam-pirenena izany.
Ny zavatra hafa dia izao: Rehefa mandinika ny vehivavy sy ny zazavavy isika, izay rehetra efa niaina ny fiainany dia mirongatra. Sarotra izany. Nihaona tamin'ireo vehivavy mpitarika maromaro aho izay nahavita be tamin'ny fireneny sy ny vehivavy sy ny zazavavy tany Afghanistan nandritra ny 20 taona lasa, anisan'izany ny volana aprily fony aho tany Kabul. Ary heveriko fa izao dia anjaran'ny vondrona iraisam-pirenena ny manao izay azontsika atao amin'ny fampiasana ny fitaovana rehetra ananantsika - ara-toekarena, ara-diplomatika, ara-politika - hiezahana haharitra ny tombony azony.
Ary ny tombotsoan'ny Taliban no tena tanjon'izy ireo - tokony hanapa-kevitra izy ireo, saingy ho an'ny tombotsoany manokana raha tena mitady ny fanekena izy ireo, ny fankatoavana iraisam-pirenena; raha mila fanohanana izy ireo, raha maniry ny hanonganana ny sazy - izany rehetra izany dia hitaky ny hitanan'izy ireo ny zo fototra, ny zo fototra. Raha tsy manao izy ireo ary raha manana toerana ambony izy ireo ary tsy manao izany dia mieritreritra aho fa ho lasa fanjakana pariah i Afghanistan.
FANONTANIANA: Sekreteram-panjakana Tony Blinken, misaotra betsaka anao nanotrona anay tamin'ity maraina ity.